लेट्स् गो, सगरमाथा र मोदी « Loktantrapost
लेट्स् गो, सगरमाथा र मोदी
११ असार २०७५, सोमबार १८:३२
केही दिन अघि सुदूरपूर्व काँकरभिट्टाबाट धरानसम्मको एक छोटोमिठो यात्रा भएथ्यो । यात्रामा म बाहेक मेरा लागि सबै अपरिचित थिए । मेरा ती अपरिचित सहयात्री बोकेर धरानतिर हुइँकिएको साधनका चालक, कन्टेक्टर र खलासी मित्रहरु पनि अपरिचितै थिए । परिचित थियो त केवल हरियो रङको साधन । अर्थात् सगरमाथा यातायात । जसले, केही वर्षयता प्रधान कार्यालय काँकरभिट्टामा राखेर यात्रुजनको यात्रा तय गराउँदैछ ।
यात्रा एकल हुँदा बडो आलस्य र आजितलाग्दो हुँदोरहेछ । धुम्धुम्ती बस्नु, पछिल्तिर कुदिरहेका सुख्खा बगर झ्यालबाट नियाल्नु, बेलाबेला उक्लने र ओर्लने क्रममा हानाथाप गरेका यात्रुको असिनपसिन अनुहार हेर्नु, गाडीभित्र अघिपछि र दायाँबायाँ बसेका मान्छेको ताल र सिलसिला नमिलेका कुरा सुन्नु इत्यादिले गन्तव्य कति बेला पुगिएला भन्ने हुँदोरहेछ । यात्राका क्रममा देखिएका गहन र उपयोगी कुरा साटासाट गर्न नपाउँदा सायद सबैलाई यस्तै हुन्छ । र, आलस्य तथा असन्तुष्टिले केवल सिटमा बसेर उङ्ने मात्र गराउँछ ।
तकरीवन अढाई घन्टाको धराने यात्रामा मलाई कसोकसो त्यस्तै हुँदैथ्यो । सगरमाथा गाडी विर्तामोडमा बिसाएको थियो । रोकिएको गाडी हिँडाउनलाई खलासी मित्रजनले जहिल्यै ढोकामा पार्ने ढ्याप्ढ्याप् हठात् फेरिएको महसुस गरेँ । र, म उतिर आकर्षित भएँ । उसले चालकलाई चल्नका लागि सूचना दिने परम्परागत शैली ‘ढ्याप्ढ्याप्’को सट्टा ‘लेट्स् गो’ शब्दले सूचित ग¥यो । कताकता रमाइलो लाग्यो । र, उसलाई पुलुक्क हेरेँ । खलासी नभएर उनी बसका भाडा सङ्कलक पो रहेछन् । मेरो आलस्यता शनैःशनैः ‘लेट्स् गो’ले हरण गर्न थाल्यो । म जिज्ञासु मुडमा नियालिरहेछु । ठाउँठाउँमा गाडी रोक्छ, यात्रुहरु ओर्लन्छन् र चढ्नेहरु चढ्छन् । अनि, उनी भन्छन्, ‘लेट्स् गो’ । अर्थात लेट्स् गो सगरमाथा !!
केही साता अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आए । उनको यसपालाको नेपाल भ्रमणमा उनलाई स्वागत गर्ने उनका समकक्षी थिए हाम्रा प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओली । उता मोदीजीको भव्य स्वागतको प्रचार, चर्चा र विज्ञापन कम थिएन । यता ओलीजी मोदीजीको समकक्षी बन्नाको भाव र भङ्गिमा, उमङ्ग र उत्सुकताको कौतुहल पनि कमको थिएन । मोदीजीको शिरमा पगरी त ओलीजीको पनि शिरमै पगरी । मोदीजीमा मधेस सूचित बस्त्र त ओलीजीमा के कम ? दुबै उत्रै, दुवै उस्तै । यो मामलोमा जनकपुरवासीको न्याय, उदारता र आत्मा उच्चकोटीको छ, मान्नै पर्छ । तब त, आफ्नो अनुहारमा नाकाबन्दीताका उडेका सङ्कटको धुलो र धुवाँले लागेका कुत्सित टाटाहरु पनि सहजै पुछपाछ गरेर अशान्त मनलाई शान्त पारे ।
जनकपुर पछि पोखरा, पोखरा पछि माथि मुस्ताङको यात्रा मोदीजीको रमाइलै भयो कि ! युद्धबाट बुद्ध बनेका ऋषिमनहरुको साथ–सहयोगमा बनेको नेपाली सरकार, नव गणतन्त्र र नयाँ अभ्यासको नेपालको यात्रासामु मोदीजीको यात्रा पनि बडो अविस्मरणीय नै रह्यो होला । र, बुद्ध र ऋषिमनको सहिष्णुता र सद्भावले ओतप्रोत नेपालमा मोदीजीले यात्राका क्रममा केके देखे र फेला पारे त्यो उनकै प्रारब्ध हो । तर, मेरो प्रारब्धले जुराएको यस सगरमाथा सयरमा यदि नरेन्द्र मोदी हुन्थे भने उनको यात्रा कस्तो हुन्थ्यो होला ? एकतमासको कुतकुतीले मेरो दिमाख कोट््यायो ।
‘ओ मिस्टर विनोद, यदि तिम्रो यस लेट्स् गो सगरमाथामा नरेन्द्र मोदीको सयर हुन्थ्यो भने कस्तो हुन्थ्यो होला हँ’ ? उनी खित्का छोडेर हाँसे । हाँस्ता उनले लगभग आँखा चिम्लिएको भान हुन्थ्यो । हातमा भएको टिकट र पैसा सम्हाल्दै उनी मेरै नजिक आए । ‘दाइ, तपाईं पनि कस्तो खिस्सी गर्नुहुन्छ । कतै मोदी यो गाडीमा हुन्छन् र’ ? ‘ल मानौँ यही गाडीमा छन् । अब भन त, भाडा कसरी माग्छौ’ ? हाँसेर डल्लो परे उनी । ‘दाइ, तपाईं चाहिँ के भन्नु हुन्थ्यो होला, सुनाउनु न ।’ उनको प्रतिप्रश्न बडो रमाइलो थियो । ‘मानौँ, मोदी तपाईंकै सिटमा छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?’ कन्सिरी कन्याउँदै पुनः आँखा चिम्ले जसरी हाँसे ।
मैले भन्नुपर्दा त यही भन्थेँ हुँला । सुन्नुस् मोदीजी । हाम्रा ओलीजी यस देशका प्रधानमन्त्री हुन् । तिमीले भन्ने गरेको बुद्ध र ऋषिमनहरुसँगको तालमेलको घानमा हाल उनलाई फुर्सद छैन । फुर्सद निकालेर तिमी त आयौ । तर पनि तिम्रा खातिर पक्कै ओलीजी काम बिसाएरै भए पनि हाजिर त हुन्छन् धन्धा नमान । बरु भन, तिमी किन माथिमाथि सगरमाथा ताकिरहेछौ ? तल मधेसमा दगुरिरहेका यी सगरमाथामा सयर गर न ।
यसमा तिमीलाई अद्भुत आनन्द आउँछ । तिमीले देख्न सक्छौ, यहाँबाट अलि पर पुगेपछि ढुकुरे खोला आउँछ । त्यस ढुकुरे खोलामा हालसम्म धेरै पानी बग्यो, उतै तिम्रैतिर । त्यस पानीमा उताका कतिले हात चोबे हुन् । र, शिरमा सेचन गर्दै आफूलाई कति चोख्याए हुन् । तर, यताको मौसम त उस्तै छ मोदीजी । उता तिम्रातिर तृप्ति होला । यता हाम्रातिर तृष्णै तृष्णा मात्र छ ।
नाकाबन्दीताका हन्टरै हन्टर खाएका मान्छे छन् । राजनीति छ । र, सिङ्गो मुलुक छ । त्यसबेला हुँदै नभएको ग्यास र डिजलको तापले यता खुब पोलेको थियो । उता भरिपूर्ण पेट्रोलले ठण्डा प्रदान गरेको हुनुपर्छ । बस् मोदीजी । हो, मोरङको यही ठाउँ हो । ल हेर, यहाँ पेट्रोल खानी छ । अब, यो खानी सम्झेर तिम्रा दिमागमा अनेकवली बजार विस्तारित हुन थाले होलान् । र, यताको कट्टर राष्ट्रवादसँग भय पनि पैदा हुन थाल्यो होला । तर, धन्धा नमान । यताको मौसम उस्तै छ । त्यो ढुकुरे खोलामा जति पानी बगे पनि यो खानीबाट एक तुर्की तेल चुहिनेवाला छैन ।
‘दाइ, भयोभयो । अबदेखि धरान आउनुपर्दा तपैँ यै मवाला सगरमाथा आउनुहोला । यसमा मोदी नचढे पनि म हुनेछु ।’ आँखा चिम्सा पार्दै खितिति हाँसेर उनले भने । गाडी इटहरीको धरान मोडमा अडेको थियो । केही बेरमै आवाज आयो, लेट्स् गो । उनले मलाई पुलुक्क हेरे । म मुसुक्क हाँसेँ ।
लेट्स् गो सगरमाथाका यी मनुवा बडो अन्तरङ्गी रहेछन् । चिम्सा आँखा, लामो केशमा महिलालेझैँ तरकीप गरी रबरले बाँधेका, छोटोमोटो कद, पाखुरामा आईएमई मोटर्स् र पछाडि सगरमाथा यातायात लेखिएको हरियो रङको टिसर्ट धारण गरेका यी गजपका मनुवा हुनसम्मका यात्रुमैत्री रहेछन् । यिनीसँग केहीबेर बोलेँ । नाउँ रहेछ विनोद राई । र, स्वभावले नै यिनी बडो विनोदी रहेछन् । यात्रुसँग सहज र सभ्य, हमेसा हँसमुख तथा नरम मिजासको व्यवहारमा सिपालु रहेछन् । लाग्यो, आफ्नो नाउँको अर्थ पुष्टि हुने गरीको यिनको विनोदी स्वभाव र मित्रवत् व्यवहार साँच्चै नै नागरिकहरुको सभ्य यात्रामा सहज सिद्ध हुनेछ ।
यसैबीच एउटा कुरा भन्नै पर्नेछ, कोहीकोही भने माप्पाका मत्थु हुन्छन् । यात्रु बोकेर हिँड्छन् । खलासीदेखि चालकसम्म गोटी, गाँजा, मद–मदिरादी सेवन गरेर लठ् पर्छन् । र, गाडी चलाउँछन् । यिनलाई गाडीको गतिवेगदेखि यात्रुसँगको बोलचालसम्ममा केकति दूरी राख्नुपर्छ कुनै मतलब नै हुँदैन । मनलागीको मातले उडीबतासझैँ उडेका हुन्छन् । मुखमा आए र जानेजतिको शब्दले बोलेका हुन्छन् । र, कुनै अजान खाडलमा लगेर जाक्ने पो हुन् कि भन्ने त्रासमा यात्रुलाई त्रसित पारेका हुन्छन् । यस्ता मत्थुजनको उपचार ट्राफिक प्रहरीले गर्न नसकिइरहेको अवस्थामा सगरमाथा यातायात र त्यसभित्रका विनोदहरुले गर्न सक्छन् कि भन्ने आशा चाहिँ गर्नैपर्छ ।